1 Ahene 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ahene Nhoma a Edi Kan 15:1-34
Yuda hene Abiam ahenni (1-8)
Yuda hene Asa ahenni (9-24)
Israel hene Nadab ahenni (25-32)
Israel hene Baasa ahenni (33, 34)
15 Nebat ba Ɔhene Yeroboam ahenni afe a ɛto so 18 mu no,+ Abiam bedii Yuda so hene.+ 2 Odii hene mfe abiɛsa wɔ Yerusalem. Ne maame din de Maaka,+ na na ɔyɛ Abisalom banana. 3 Nneɛma bɔne a ne papa yɛe nyinaa, ɛno ara bi na ɔno nso yɛe; ne koma anni mu wɔ Yehowa ne Nyankopɔn ho te sɛ ne nana Dawid. 4 Nanso Dawid nti,+ Yehowa ne Nyankopɔn ma onyaa kanea* wɔ Yerusalem+ bere a ɔmaa ne ba bedii n’ade na ɔmaa Yerusalem gyinae no. 5 Nea ɛte ne sɛ, Dawid yɛɛ nea ɛteɛ wɔ Yehowa ani so, na biribiara a ɔka kyerɛɛ no no, ne nkwa nna nyinaa wannan amfi ho, gye Hitini Uria asɛm no nko ara mu.+ 6 Rehoboam nkwa nna nyinaa, ntɔkwaw ampa ɔne Yeroboam ntam da.+ 7 Abiam ho nsɛm a aka ne nea ɔyɛe nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Yuda ahemfo abakɔsɛm nhoma no mu.+ Ntɔkwaw bɛdaa Abiam ne Yeroboam nso ntam.+ 8 Abiam ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no wɔ Dawid Kurow mu, na ne ba Asa+ bedii n’ade.+ 9 Israel hene Yeroboam ahenni afe a ɛto so 20 mu no, Asa bedii Yuda so hene. 10 Odii hene mfe 41 wɔ Yerusalem; ne nanabea din de Maaka,+ na na ɔyɛ Abisalom banana. 11 Asa yɛɛ nea ɛteɛ wɔ Yehowa ani so+ te sɛ ne nana Dawid. 12 Tuutuufo mmarima a wɔwɔ asɔrefi hɔ no, otuu wɔn fii asaase no so,+ na oyiyii abosom fĩ* a n’agyanom yeyɛe no nyinaa.+ 13 Ne nanabea Maaka+ mpo, otuu no ade so, na wamma wanyɛ ɔbaapanyin bio, efisɛ na wayɛ ohoni tantan bi+ a wɔde som abosonnua.* Asa twaa ohoni tantan no, na ɔkɔhyewee wɔ Kidron Bon+ mu. 14 Mmom sorɔnsorɔmmea* no de, ɛkaa hɔ.+ Nanso Asa nkwa nna* nyinaa, na ne koma di mu wɔ Yehowa ho. 15 Na ɔde nneɛma a ɔne ne papa yɛɛ no kronkron no baa Yehowa fi hɔ; dwetɛ, sika kɔkɔɔ, ne nneɛma a aka no.+ 16 Ntɔkwaw ampa Asa ne Israel hene Baasa+ ntam da. 17 Enti Israel hene Baasa baa Yuda so, na ofii ase sɛ ɔresan akyekye Rama+ kurow no* sɛnea ɛbɛyɛ a obiara rentumi mfi Yuda hene Asa nkyɛn mma anaa obiara rentumi nkɔ ne nkyɛn.*+ 18 Ɛnna Asa de Yehowa fi ne ahemfi* akorade mu dwetɛ ne sika kɔkɔɔ a aka nyinaa maa n’asomfo, na Ɔhene Asa somaa wɔn kɔɔ Tabrimon ba Hesion ba Siria hene Ben-Hadad+ a ɔte Damasko no nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: 19 “Apam* da me ne wo ntam, ne me papa ne wo papa ntam. Merebɛkyɛ wo dwetɛ ne sika kɔkɔɔ. Bra na betwa apam* a wo ne Israel hene Baasa ayɛ no mu na omfi me so nkɔ.” 20 Ben-Hadad tiee Ɔhene Asa, na ɔsomaa n’asahene kɔɔ Israel nkurow so, na wɔko faa Eyon,+ Dan,+ Abel-Bet-Maaka, ne Kineret ne Naftali nsaase nyinaa. 21 Bere a Baasa tee no, ntɛm ara na ogyaee Rama kyekye,* na ɔtenaa Tirsa.+ 22 Ɛnna Ɔhene Asa boaboaa Yuda nyinaa ano, wanyi obiara amfi mu, na wɔkɔsesaw abo ne nnua a na Baasa de rekyekye Rama no, na Ɔhene Asa de kɔkyekyee Geba+ a ɛwɔ Benyamin, ne Mispa.*+ 23 Asa ho nsɛm a aka nyinaa, ne nnwuma akɛse ne nea ɔyɛe nyinaa ne nkurow a ɔkyekyee* no, wɔakyerɛw wɔ Yuda ahemfo abakɔsɛm nhoma no mu. Nanso ne nkwakoraabere mu no, ɔyaree ne nan.+ 24 Na Asa ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no kaa n’agyanom ho wɔ ne nana Dawid Kurow mu, na ne ba Yehosafat+ bedii n’ade. 25 Yuda hene Asa ahenni afe a ɛto so abien mu no, Yeroboam ba Nadab+ bedii Israel so hene, na odii Israel so hene mfe abien. 26 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne, na nneɛma bɔne a ne papa yɛe a ɛmaa Israel nso yɛɛ bɔne no, ɛno ara bi na ɔyɛe.+ 27 Ahiya ba Baasa a ofi Isakar fi no bɔɔ Nadab ho pɔw, na Baasa kum no wɔ Gibeton+ a ɛwɔ Filistifo asaase so; saa bere no, na Nadab ne Israel nyinaa atwa Gibeton ho ahyia. 28 Enti Baasa kum no wɔ Yuda hene Asa ahenni afe a ɛto so abiɛsa mu, na osii n’anan dii hene. 29 Bere a ɔbɛyɛɛ ɔhene ara pɛ, okunkum Yeroboam fifo nyinaa. Wannyaw Yeroboam ho nipa baako mpo;* ɔtɔree wɔn nyinaa ase maa Yehowa asɛm a ɔnam n’akoa Siloni Ahiya so kae no baa mu.+ 30 Nea enti a ɛbaa saa ne sɛ, Yeroboam yɛɛ bɔne na ɔtwetwee Israel nso kɔɔ bɔne mu, na ɔhyɛɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn abufuw kɛse. 31 Nadab ho nsɛm a aka, ne nea ɔyɛe nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Israel ahemfo abakɔsɛm nhoma no mu. 32 Na ntɔkwaw ampa Asa ne Israel hene Baasa ntam da.+ 33 Yuda hene Asa ahenni afe a ɛto so abiɛsa mu no, Ahiya ba Baasa bɛyɛɛ Israel nyinaa so hene wɔ Tirsa, na odii ade mfe 24.+ 34 Nanso ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne,+ na nneɛma bɔne a Yeroboam yɛe a ɛmaa Israel nso yɛɛ bɔne no, ɛno ara bi na ɔyɛe.+
^ Nt., “Asa nna.”
^ Anaa “ɔrehyɛ Rama kurow no den.”
^ Anaa “kosiesiee Geba a ɛwɔ Benyamin, ne Mispa ma ɛyɛɛ den.”
^ Anaa “nkurow a ɔhyɛɛ no den.”
^ Anaa “ho nipa biara a ahome wɔ ne mu.”
1 Ahene 15